Tattoos waa xarrago | Ragga Stylish
Tattoos waa xarrago
Tattoos-ka wuxuu ku wareegsanaa jirkeena muddo dheer ka hor intaadan fikirin. Weli waxaa jira waxyaabo tilmaamaya in dhaqankan la qabtay kumanaan sano. Way dhammaadeen waqtiyadii ay calaamado maqaarku ku ahaan jireen waxa lagu xukumo, maafiyada, yakuzas ama badmaaxiinta kelinimada ah.
Ilaa goor aan fogayn, dadku si xun ayay u xaglinayeen dhammaan kuwa go'aansaday inay midabeeyaan maqaarkooda. Maanta, way ka sii ballaadhan tahay sidaan u maleyneyno mana ka baqeyno in dhakhtarkayaga, madaxayaga ama macallinkaagu jidhkooda ku sawiraan. Intaa waxaa dheer, waa dhaqan ka sii ballaadhan sidii aan filayay, gudaha Mareykanka waxaa lagu qiyaasaa in afartii qofba mid ka mid ah uu ugu yaraan hal tattoo ku hayo maqaarkooda. Laakiin tattoosku ma qurux badan yihiin? Way iska cadahay in dadka adduunka ku nool moodada oo aan u tixgalino guryo waaweyn oo ka tirsan waaxda aysan necbeynin tattoo wanaagsan. Adiga si aad uhesho bartaas xarrago leh, raac talooyinkayaga yar:
Tilmaamaha si loo helo tattoo wanaagsan
Xulo naqshad aadan si fudud uga daali doonin. Ma jiro magacyo meher oo sanado yar gudahood aad ka qoomamayn doonto oo aad uga gudbi doontid liiska wax iibsiga. Xullo wax aad jeceshahay ama macno gaar ah kuu leh.
Waxa jira meelo jidhka ka mid ah oo aan aad loogu talin karin in la sawiro. Wejigu gebi ahaanba waa mamnuuc! Maskaxda ku hay in ay jiraan qaybo maqaarkaaga ka mid ah oo haddii aad ku shaqayso suud ama shaqo aan la oggolaan karin in la sawiro. Xulo aagagga istiraatiijiga ah.
Haddii aad go'aansatay inaad qaaddo tallaabada weyn ee calaamadeynta maqaarkaaga, naftaada ha gelin gacanta qofna. Hadda waxaa jira aqoonyahanno dhab ah oo khad ah oo u isticmaala maqaarkayaga sida shiraacyo u beddelaya jidhkeenna farshaxanno run ah.
Qaar badan oo ka mid ah farshaxanno waaweyn oo tattoo ah ayaa caan ku ah adduunka sida kiiska Waqooyiga Ameerika Ami james lagu yaqaan bandhigiisa Xulka Miami. Farshaxanka badan ee loo yaqaan 'tattoo artist' wuxuu kiciyaa xiisaha, isagoo abuuraya xariiqyo dhaadheer si uu ballan uga helo istuudiyahiisa. Iyada oo qayb ka ah muuqaalkiisa maadooyinka kala duwan, waxaa jira muuqaalkiisa naqshadeeye. Xilligan Dayrta-Jiilaalka wuxuu ku biirey xoogagga Hummel si ay ula wadaagaan shirkaddiisa Tattoodo uruurin u gaar ah oo asal ah.. Saxiixiisa wuxuu ku sugan yahay labadaba kabaha isboortiga ee caanka ah iyo khadadka dharka caadiga ah iyo kuwa isboortiga, isagoo xaqiijinaya markale adduunka tattoo-ka ayaa ka mood badan sidii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tattoos waa xarrago
Astaamo noocee ah ayaa lagu arki karaa jardiinada wanaagsan?
Baaskiilada ugu waxtarka badan adduunka